Deseat.me, coca i-imeyile yakho kwabo babhalisileyo bonwabile | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | software
Ngenani elikhulu leenkonzo ezikhoyo kwi-Intanethi, Kuqhelekile ukuba ubhalise ngaphezu kwesinye ushiya idatha yakho kwaye ufumana rhoqo ii-imeyile ezicaphukisayo ezizalisa ibhokisi yakho engenayo. Ukongeza, yenza i-panorama ecaphukisayo ukuba singomnye wabo bahlala besebenza ngeakhawunti ye-imeyile kwaye kufuneka ibhokisi yethu yebhokisi engenayo icoceke kangangoko. Kwaye kulapho iinkonzo ezinje Umnqweno.me.
Le nkonzo iyakwenza iiakhawunti zakho ze-imeyile zikhuseleke kuzo zonke ezo ntlawulo ukuba nje bakoyisile ngenxa yezizathu ezithile-okanye hayi- kwaye awunalo noluvo lokuba le nkonzo inedatha yakho (igama, idilesi, umhla wokuzalwa, njl. njl.) kwaye uyayisebenzisa. Ngoku, eyona nto intle malunga nale nkonzo yindlela ekulula ngayo ukuyisebenzisa.
I-Deseat.me isebenza ngokuskena iiakhawunti zethu ze-imeyile. Ngoku ukuze isebenze Kuya kufuneka uneakhawunti esebenzayo kwiGmail okanye kwi-Outlook. Ukuba uhlangabezana nale mfuno, into elandelayo iya kuba kukuthunga kwaye ucule.
Xa ungena kwisango leDeseat.me, uya kundityala sayina kunye neakhawunti yakho kaGoogle okanye yeMicrosoft. Nje ukuba ungene ngaphakathi kwitracker tracker, isikrini siza kubuya emva kwemizuzu embalwa. Kuyo, yonke imirhumo iya kuvela, zombini ozisebenzisayo kunye nezilityelweyo.
Inyathelo elilandelayo kukukhetha ukuba zeziphi na oza kuzisusa kwiibhokisi zakho zebhokisi. Kodwa lumka, iDeseat.me ayixhomekekanga ekususeni le ntlawulo. Le nkonzo ubeka ikhonkco ngqo kumaphepha angabhaliswanga wobhaliso ngalunye. Ke ngoko, uya kuba noxanduva lokuthatha inyathelo lokugqibela.
Kwakhona, ukuba ukuba bucala yenye yeengxaki ezikukhathaza kakhulu, hlisa umoya. Kufuneka uyazi loo nto I-Deseat.me ayigcini nayiphi na idatha yakho -Kanoko abaphuhlisi bachaza njalo. Kodwa ukuba awubathembi, ungarhoxa kwi-tracker nje ukuba ugqibe ukukhupha ubhaliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Deseat.me, coca i-imeyile yakho kulolo rhumo lubhalisiweyo
Ndiyasithanda esi sixhobo sePC
Umhleli wemveli we-YouTube uza kuyeka ukusebenza ngoSeptemba 20